Thanda izinkondlo Nekrasov - kukhombisa uthando kombhali siqu inhliziyo
Publications nokubhala izihloko, Izinkondlo
Lapho behlangana UNikolai Nekrasov lokusungula ngokuvamile akukho kuhlobana imisebenzi yothando. Ngokuyinhloko, sibonisa emgqeni ekuphileni kwansuku zonke. Lokhu kungabonakala ikakhulu imisebenzi yakhe ngokuthi "Abesifazane emizaneni Russian" nelithi "abantwana ongumlimi". Nokho, lapho ucwaningo eduze wokuphila izinkondlo of imbongi kuba sobala ukuthi uthando isosha esihlatshelelwayo ngemisebenzi Nekrasov kwaba isekhona.
Imizwa futhi ukuphila ngemisebenzi UNikolai
Nekrasov, kanye nabanye abantu abaningi yokudala, wayeyindoda kuwuthando ngempela. ubunjalo Sexy yafuna khona njalo ekuphileni kwakhe, cabanga, futhi-ke, lokhu kubonakala emisebenzini yakhe. Ngokwe womlando imbongi, uthando lyric Nekrasov wabonakala ngesikhathi uthando lokuqala umphathi. Kwakumnandi, kodwa ngesikhathi esifanayo intombazane zobuqili. UNikolai buvumelana ke, izindleko ngesikhathi inxiba yakhe. Kodwa uthando lwakhe kwaba uhlamvu kunalokho yasemhlabeni futhi kubhekwa abagxeki abaningi tetemibhalo, waba uhlobo "uthando plebeian." Nokho, kamuva ekuphileni Classic uvele uthando abanothando futhi uyahlanya ngoba Avdote Panaevoy olungenakuqhathaniswa.
It Avdotya UNikolai enikelwe omunye ngemijikelezo imisebenzi yabo. Singasho ukuthi izinkondlo uthando Nekrasov wobuciko kweqiniso kule nkathi. imigqa zakhe lwangena imizwa ejulile wesifazane. Nekrasov wathi inkanuko ngothando, ugqozi futhi abaqotho kakhulu. Kodwa ungacabangi ukuthi lezi ubudlelwane babe Licwathile nokukhanya. Phela, eqinisweni imbongi amthandayo intokazi oshadile. Nokho, lokhu ehilelekile 'encane' ukuphila kwakhe akazange abe isikhubekiso. Futhi abathandi kwalokho, kumnyama noma kubomvu, waqala ukuphila ndawonye. Yiziphi izici eziyinhloko uthando izinkondlo Nekrasov? Ukufunda eminingi yemisebenzi yakhe, sibona ukuthi yonke isiphepho imizwelo, konke unina amkhulelwe ingqondo, udluliselwa leli phephandaba. Yingakho uthando poems Nekrasov e emigqeni azinikele Panaeva, bunohlamvu abanye ngokuphila kwakhe. Omunye angabona ukuthi ukudala umjikelezo olusankondlo, umlobi wayegcwele ebabayo. UNikolai wayeqotho ukuba konke okusemandleni, futhi ngisengozini ngempela. Njengoba abahlaziyi bemibhalo awuzisho lezi imisebenzi emadanisekako ngobuqotho imizwa kuphela "umjikelezo Denisevskim" Tiutchev.
Izithombe imisebenzi by namaqhawe
Umsebenzi lyrical "amazed ukulahlekelwa irretrievable," imbongi ekutshela ukuthi uthando uyafa intando ukudalelwa.
Namanje - ebumnyameni abandayo engcwabeni,
Ihlazo kuwe, udumo inzondo, uthando -
Waphuma nokulonda intukuthelo,
Lokho eside ngikhuphukile sekuqala ukufudumala igazi.
Njengoba ungase ubone lezi imigqa, umlingisi sincike imizwa yayo. Ukulahleka ethandekayo kwenza kube ubuntu Limp futhi ibuthakathaka. Owesifazane ondodana Uhlamvu uzizwa, uyafa, futhi kunzima kakhulu ukuba aqonde futhi amukele imithetho yonke. Kodwa hhayi imizwa kungaba emuva, kanye kungenzeki ukuba ngibuyele emuva ngingahambi ngesikhathi. The hero ishiywa wedwa ngokuphumelelayo nosizi lwabo futhi simsize, akekho umuntu ongakwenza eyodwa. Thanda inkondlo izinkondlo Nekrasov sika, eyabhalwa kuye umuntu eqhuma uthando nesisa, libhekene ngokumhlonipha ethandekayo. Ezinkondlweni zakhe isithombe abesifazane has a intando enamandla kakhulu nokuzimisela, ngenkathi hero ngokuvamile bancishwa izimfanelo ezinjalo. Singasho ukuthi hero uthando imisebenzi UNikolai ukukopishwa yena kuyinto cwaningo esifanayo, bengalondekile futhi njalo uhlamvu bengabaza, kodwa akalilahlile ikhono uthando.
Sokuzindla uthando inhliziyo ngemisebenzi imbongi
Ngaphezu kuthandana Panaeva, empilweni imbongi sika kwadingeka nezinye uthando. Awusho-ke Nikolai kwaba nokuba nobuhlobo Selena Lefroy, umsuka French. Ngesikhathi Nekrasov wakwazi ukwenza ngcono isimo sabo sezimali. Yiqiniso, kuhle emehlweni uthando lwakhe olusha. Yiqiniso, wayeqaphela kahle ephethe Selina, kodwa imizwa yakhe ayeqinile kunabo. Thanda izinkondlo Nekrasov ngesikhathi yagcwala ukungabaza kwakhe, ukuhlupheka nemicabango esindayo. Ngokushesha, amaFulentshi wathatha indawo azihlukile kakhulu ezivela kuye Praskovja Meisha. Le ntokazi isivele ngaleso sikhathi engumfelokazi futhi wakwazi kakhulu ukuzuza isimo imbongi.
Kugcine Lyubov Nekrasova
Ukubhekelela luyingqophamlando wamashumi omahlanu emphefumulweni imbongi sika futhi kwaqala imizwa yothando, kodwa iminyaka engamashumi amabili Fekle Anisimovne Viktorovoy. Ubudala akuvimbeli Z kusukela efanayo umoya wokushisekela, intshiseko nokuzimisela sokunikela imizwa yakhe. Ikakhulukazi Indodakazi iphendula ithi kuye ukubuya futhi awukwazi ukucabanga ngokuba khona kwawo ngaphandle kwalo. Ngemva kwesikhashana, ekubekeni okuningi imizamo kanye ukugcwalisa izikhala imfundo, imbongi ethandekayo Thecla siguqulelwa UZinaida. Yiqiniso, ukuthi ngenkathi imisebenzi imbongi baye baba kuyiwa. Ngaleso sikhathi, wabhala umjikelezo izinkondlo. Z imizwa le ntombazane kade zinyanga ekuphileni kwakhe. Ngokusobala, lokhu yikho kwaphoqa Nekrasov, nokunamathelisa inyunyana yabo esontweni.
Ngemva kokutadisha ukuphila imbongi sika, kumele kuphetfwe ukuthi ukuhlukahluka kanye kaningi imisebenzi yothando ezihlobene ne eziningi inhliziyo uthando imbongi. inombolo okunjalo imijikelezo lyrical Yiqiniso, ahlanganiswe kakhulu izincwadi Russian. Ngoba uthando imbongi - kuba njalo ubuhlungu nokuhlupheka. Ngakolunye uhlangothi, le mizwa umuntu acebile, kodwa ngakolunye - it is ngaphakathi buthaka futhi alutheke. Kodwa lokhu umthetho wothando:
Ngiyaxolisa! Angikhumbuli izinsuku ukuwa,
Isifiso, ukudabuka, intukuthelo -
Angikhumbuli kweziphepho, musa ukukhumbula izinyembezi,
Ungakhumbuli Umhawu ka izinsongo!
UJohann Wolfgang von Goethe: Biography, izithombe, imibhalo, izingcaphuno
"Ingulube ngaphansi kwesihlahla som-okhi" - kuyinganekwane ngomuzwa nzima
Uhlaziyo inkondlo "Uma izwe uhlobo edabukisayo" Tiutchev ibonisa ubuhlobo phakathi komuntu nemvelo zomhlaba kwangaphakathi
Yuriy Egorov: Biography, nobuciko kanye izinkondlo engcono
Biography Krylova I. A. Ukuphila Ethanda Umsebenzi fabulist abadumile
Negesi isitofu nge gas kuhhavini - Izinzuzo nezingozi nebubi
Kuyini iTunes nokuthi ukuyisebenzisa
Izidakamizwa "Hepatosan": yokusetshenziswa, intengo
I-Lipetsk Pedagogical University: ama-faculty, amakhono, izinga lokudlula
Indlela yokwenza uhlu olwehliswayo e-HTML
Generator Bedini - inganekwane noma iqiniso?
Indlela ukulanda umculo kusuka "EC" phezu "Android"? Uhlelo ukulanda umculo kusukela "EC '
Hyde ku Bludsikera ( "Dota 2"), noma iqhawe olunegazi
Patchouli. Essential uwoyela: izakhiwo futhi isebenzisa
Japan Navy: ulwazi olujwayelekile
Indawo yaseBrazil, imvelo kanye nenani laleli zwe